भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जुन जुलाईमा उच्च विन्दुमा पुग्ने ! « News24 : Premium News Channel
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जुन जुलाईमा उच्च विन्दुमा पुग्ने !
एजेन्सी, १२ जेठ । भारतमा जुन र जुलाईमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च विन्दुमा पुग्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । एम्स निर्देशकलाई उद्धृत गर्दै भारतका सञ्चार माध्यमहरुमा कोरोना जुन – जुलाईमा चरम बिन्दुमा पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएको हो ।
गत शुक्रबार भारतका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि एक पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना उच्च विन्दुमा आउने बताए । उनले आफू विशेषज्ञ नभएको तर कोरोना संक्रमण उच्च विन्दुमा ढिला गरी आउने त्यो जुन–जुलाईमा या अगस्ट पनि हुन सक्ने सूचना पाएको बताए । यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन तयार रहनु पर्ने पनि गान्धीको भनाइ थियो ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागका सहसचिव लुभ अग्रवालले भनेका छन् ‘यदि सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू पालना गरेमा सम्भवतः कोरोनाको शिखर नआउन पनि सक्छ। तर यो शिखर के हो रु यो कहिँ पनि वर्णन गरिएको छैन। त्यो शिखरमा प्रत्येक दिन कति वटा केसहरू आउँछन् भनेर छलफल गरिएको पनि छैन।’
यी अनुमानहरु सार्वजनिक भएपछि भारतीय नागरिकहरु अब लकडाउन झनै थपिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरु अब बल्ल बल्ल खुलेका केही पसलहरु पुनः बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने भन्दै पिरोेलिन थालेका छन् ।